हाम्रो एकसूत्रीय माग भनेको नै मूल्यवृद्धि फिर्ता हो, नभए आन्दोलन जारी रहन्छ : नेविसंघ महामन्त्री तिमल्सिना
प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १८:००
काठमाडौं, २६ कार्तिक । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म आफूहरको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । उनले भने,‘हामी अहिले सुतेर बसेका छैनौं । आज क्लबका सभापति ऋषि धमलाले झक्झकाउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । हामी संघर्षमा छौं । हामीले पटक पटक आयल निगमलाई आग्रह गरेका थियौं कि, मूल्यवृद्धि हुनुहुँदैन् । भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनुपर्छ ।’
आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले को सत्तामा छ र को सत्ता बाहिर छ ? भनेर विद्यार्थी संगठनले अब आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘यस्तो कुरा साथीहरुले पहिले गर्ने गरेका थिए, यो अघिको कुरा थियो । यो विद्यार्थी आन्दोलन सधैंभरिको स्थायी प्रतिपक्ष हो । हाम्रो एकसूत्रीय माग हो–यो मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनुपर्छ। आयल निगमले गर्नसक्ने विषय धेरै छन् । स्वचालित मूल्यवृद्धि भन्दा अघि गएर अगाडि गएर मूल्यवृद्धि गरियो । आम उपभोक्ताको रोजगारी गुमेको छ । आम्दानी घटेको छ । मूल्य संचितीकरणको लागि खडा गरिएको कोष छ, यो रकम कहिलेको लागि हो ? कर उठाउने माध्यम यो ईन्धन मात्रै हो ? ८३ रुपैयाँमा किनेर १३६ रुपैयाँ लिने यो त गलत भयो नि ।’
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाईएको कर कटौती गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘आयल निगमले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’